« Andraikitry ny fiangonana ny mitaiza ny olona hiaina amin’ny fahamarinana ». Rehefa tsy mijoro amin’ny fahamarinana ny olona iray, tsy misy ny fampandrosoana. Ho an’ny fiangonan’ i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM), amin’ny alalan’ny fitoriana ny filazantsara ny hamolavolana ny olona handala ny fahamarinana.
ACTUALITE/ CULTURE/ Réligion/ SOCIAL
UMMI MADAGASCAR: Nosakanana tsy hisotro rano ny mpaminany Imam Houssen.
Lynda ANDRIATSITONTA 1 Commentaire oct 4, 2017
Ho fahatsiarovana ny mpaminany Imam Houssen, maritioran’ny “fahamarinana sy ny rariny” ho an’ny mpino silamo, nizara rano fisotro madiosy ny ranom-boankazo maimaim-poana ny fikambanana UMMI.
ANTILY MPIANJORIA: Ho tombom-panabeazana ho an’ny mpanabe ny lasy “anjoria bevata”.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire juil 18, 2017
Ho fanatsarana ny fahaizan’ny mpanabe ao amin’ny skoto antilin’i Madagasikara, sampana mpianjoria ny lasy nasionaly izay ho tanterahina ny 09 ka hatramin’ny 13 aogositra 2017, any Ambohindralambo, Imeritsiatosika. Mba hananan’ny tomponandraikitra tombom-panabeazana mifanaraka amin’ny filan’ireo ankizy no tanjona amin’ity lasy “Anjoria bevata” ity, araka ny fanazavan’ny filohan’ny sampana mpianjoria nasionaly, Ramilijaona Jean Luc Edgar (Lemaitso).
VAVAKA SY FIDERANA: Haneho fahagagana ny Tompo.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire juin 21, 2017
Delegasiona avy any ivelany 300 isa, manao asa misiona ara-pilazantsara no tonga eto Antananarivo amin’izao fotoana izao. Misy ny fitoriana ny filazantsara karakarain’izy ireo eny amin’ny kianjan’Alarobia. Manomboka androany 21 jona izany ary tsy hifarana raha tsy amin’ny alahady 25 jona 2017.
SYNODAM-PARITANY ANDREFANA FJKM: Feno 20 taona ny fikambanan’ny diakona sy loholona.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire mai 18, 2017
Feno roapolo taona ny firasain’ny Diakona sy ny Loholona ao amin’ny synodam-paritany Andrefana an’ny fiangonana ny FJKM. Ho fanamarihana ny fankalazana, hotanterahina eny amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny sabotsy 20 may 2017 ho avy izao ny fotoam-pivavahana ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.
Fiangonana TaJeKri : Hotohizana ny alatsinainin’ny Paska ny fotoam-piderana
journal madagascar 0 Commentaire avr 13, 2017
Ny Paska dia fotoam-piderana manokana raha efa midera an’i Jesosy isan’andro mandavantaona. Fa ny alahadin’ny Paska kosa dia miavaka io fiderana io satria misy ny fikarakarana ny mofo tsy masirasira.
ACTUALITE/ CULTURE/ Réligion/ SOCIAL/ Traditionnel
OPUS DEI FIDERANA : Un magazine à vocation cultuelle.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire déc 31, 2016
La famille de média s’augmente aujourd’hui, un nouveau magazine est apparu ce décembre 2016. Parmi les 35 presses écrites, Opus Dei Fiderana est un magazine cultuel dont la culture, foi et religion sont les bases de la rédaction. PHOTO
PASTEUR MAILHOL: Tsy hilatsaka ho fidiana amin’ny 2018.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire déc 22, 2016
Hatramin’ny mpitondra fivavahana, tsy matoky intsony ity fitondrana ankehitriny ity. Efa tsy takona afenina ny kolikoly avo lenta.
Lynda ANDRIATSITONTA Andriamanitra, fiangonana FMFOI	11 Comments oct 7, 2016
Maro amin’izao fotoana izao no midodododo mitady an’Andriamanitra raha sendra ady sy olana fa indrindra rehefa marary. Ny ankamaroan’ireo sahiram-pivelomana dia efa fahazarana ho azy ireo izany. Noresahan’i Pasitera Benjamina, ao amin’ny fiangonana FMFOI kosa ny momban’ireo mpanana-karena sy manam-pahaizana. VIDEO